संविधान दिवसकै दिन कमलबजार नगरपालिकामा शक्तिशाली बिस्फोट, के छ अवस्था ? — Sanchar Kendra
संविधान दिवसकै दिन कमलबजार नगरपालिकामा शक्तिशाली बिस्फोट, के छ अवस्था ?
काठमाडौँ । आज सविधान दिवसकै दिन अछाम स्थित गएराति कमलबजार नगरपालिकामा शक्बतिशाली ब ‘म विस्फोट भएको छ । राति करिव पौने १ बजे नगरपालिका कार्यालयमाप्रेसर कुकुर ब’म विस्फोट गराएको प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए। उक्त बिस्फोटबाट ठूलो क्षति नभएको शाहीले बताए । तार जोडेर करीब १०० मिटर टाढाबाट ब’म विस्फोट गराईएको हुन् सक्ने प्रहरीले अनुमान् गरेको छ । प्रहरीले विस्फोट गराउने समूहको खोजी भईरहेको जानकारी दिएको छ । उक्त शक्तिशाली ब ‘म बिस्फोटले गरपालिका कार्यालयको ढोका नजीक खाल्डो परेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडकबहादुर विष्टले बताए । यसअघि भदौ २९ गते रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष झङ्कर साउदलाई लक्षित गरी उनको निवासमै अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको थियो । नगरपालिका कार्यालयमै ब’म विस्फोट भएपछि कर्मचारी त्रसित बनेका छन् । त्यस्तै हेटौंडा १ बुद्ध चोकमा प्रसेर कुकरभित्र भेटिएको शं’कास्प’द वस्तु नेपालि सेनाको टोलीले डि’स्पो’ज गरेको छ । हामो मनि ट्रान्सफर नजिक प्रेसर कुकरमा भेटिएको उक्त शं’कास्प’द वस्तुलाई डि’स्पो’जल टोलीले डिस्पोज गरेको छ ।
यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कास्की जिल्ला सेक्रेटरी जंगबहादुर भण्डारी ‘आक्रोश’सहित ३ नेतालाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको गेटबाट गिरफ्तार गरेको छ । सर्वाेच्चको आदेशमा रिहा भएका भण्डारीसहित अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय सदस्य मिलन राई र अखिल (क्रान्तिकारी)कै कास्की अध्यक्ष काजी गुरुङलाई प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरेको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथिको बहसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्दोष ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर आदेशमा रिहा भएलगत्तै गेटबाहिर सशस्त्र रुपमा तैनाथ प्रहरीको टोलीले उनीहरुलाई गिरफ्तार गरेको हो । टेकु लगिएको बुझिएको छ ।